यी १२ खानेकुरा दुधसँग भुलेरपनि नखानुहोस् – Krazy NepaL
October 28, 2020 395
दुध सामान्यतया हानीरहित पोषिलो पदार्थ हो भन्ने मानिन्छ । अझ भैसी भन्दा गाईको दुध जुनसुकै अवस्थामा जोसुकैले पिउँन सकिने भनेर धेरै बिरामीहरुलाई सिफारिस पनि गरिन्छ । तर दुधका पनि आफ्नै सिमाहरु छन् ।
जुनसुकै खानासँग दुध खाने हो भने अथवा दुध खाने बित्तिकै ति कुराहरु खाने हो भने शरिरमा हा-नी गर्छ । यस्तै कुरा थाहा नपाएर हामी कति जना ‘फुड पोइजनिङ’को शिकार पनि हुने गर्छौँ । दुधसँग खान नहुने कुराहरु जसका बारेमा थाहा नपाएर हामी बि-रामी हुन्छौ ।
-कालो दालसँग दुध हामीले प्राय दुध खानासँग प्रयोग गर्ने गर्छौ । तर, यदी खानामा कालो दालको प्रयोग गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा दुध नपिउनु राम्रो हुन्छ । यसले स्वास्थ्यलाई उल्टै असर गर्छ ।
दहीसँग दुध दुधका साथै दही कहिल्यै पनि नपिउनुहोस् । दही र दुध सँगै लिँदा छालाको रो-ग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
– मूला, माछामासु जस्ता पदार्थसँग दुध दुधको साथमा मूला, माछामासु जस्ता पदार्थ नलिनुहोस् । यी चीज दुधसँग प्रयोग गर्दा यसले झन् नकारात्मक अ-सर पर्छ । यसको प्रयोगले तपाइको छालामा सम-स्या देखिन सक्छ । माछा निकै गर्मी चीज हो तातो चिसोको एकैपटक शरीरले पचाउँन सक्दैन र सेतो दाग वा ‘फ्लेरी’ हुन शुरु गर्दछ ।
-नुन र करेलासँग दुध दुधसँग नुन र करेला खानु पनि फाइदाजनक हुँदैन । यसले स्वास्थ्यलाई नकारात्मक अ-सर गर्छ ।
-तिलको सेवनसँग दुध दुधसँगै तिलको सेवन गर्नु पनि हा-निकारक हुन्छ । यसले छालाको रो-ग आउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
-कागतीसँग दुध दुधसँग कागती लिनु पनि निकै हा-निकारक हन्छ ।
-रहरको दालसँग दुध रहरको दाल र दुध दुवैले पच्नका लागि धेरै समय लिन्छन । यी दुवै खानेकुराहरु एकै चोटी खानाले अपच हुने र ग्याँसको समस्या देखापर्न सक्छ ।
-नुनिलो खानेकुराहरु सँग दुध दुधको साथमा चिप्स, नमकिन जस्ता खानेकुराहरु नखानुहोस् । नुनको कारण दुधमा हुने प्रोटिनको पुरै फाइदा हाम्रो शरिरले लिन सक्दैन र छालासँग सम्बन्धित समस्याहरु देखा पर्न पनि सक्छन् ।
– प्याजसँग दुध खानामा प्याज छ भने खानासँग वा खानापछि दुध नखानुहोला । यो मिश्रणले छालामा दा’द, एल’र्जी सोराइसिस लगायतका समस्या निम्तिन सक्छन् ।
– खुर्सानी र मसलादार खानासँग दुध खुर्सानी र मसलादार खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने यसको साथमा दुध र दुधजन्य परिकारहरु नखानुहोला । यी खानेकुराहरु सँगसँगै खाएमा पेट दुख्ने, ए’सिडिटि, ग्या’स र बा’न्ता हुने जस्ता सम’स्याहरु आउन सक्छन् ।
– केरासँग दुध रुघाखोकीको स-मस्या छ भने दुधको साथमा केरा नखानुहोला । यसले झनै खोकी बढाँउछ ।
यी ११ कुराहरु सँधै याद राख्नुहोला र सकेसम्म यी खानेकुराहरु खाए पछि दुध नपिउँनुहोला अथवा दुध पिएको केहिबेरमा नै यी खानेकुराहरु नखानुहोला ।
दुध कसरी पिउने हो ? यसलाई कतिबेला पिउने ?
– रातमा दूध पिउँदाका फाइदा दूध पिउने सबैभन्दा उपयुक्त समय राति सुत्नुअघि नै हो । आयुर्वेदका अुनसार दूधमा सेडेटिभ गुण पनि हुन्छ जसको कारणले रातमा यसलाई पिउँदा यसमा हुने सेरोटोनिनले अतपाईंलाई शान्त बनाउँछ र राति मिठो निद्रा पर्छ ।
-दूधलाई मिल्क सेक बनाएर नपिउने आयुर्वेदका अनुसार दूधलाई मिल्कसेकको रुपमा पिउनु स्वास्थ्यका लागि ठिक छैन । दूधमा काँचो फल, केरा, आप आदि मिलाएर खानु हुँदैन ।
– दुधमा केरा नमिसाउने केरालाई दूधसँग मिलाएर खानु हुँदैन किनकी यसबाट शरीरमा टक्सिन जम्मा हुन थाल्छन् । यसले गर्दा रुघा, खो-की, ज्व-रो ए-लर्जी र छालाका समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् ।
– दुध पिउने विशेष समय आयुर्वेदका अनुसार हरेक दिन दूध पिउने एउटा विशेष समय हुन्छ । उक्त समयमा दूध पिउँदा तपाईंले बढिभन्दा बढि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ ।
– राती पचाउन नसके बिहान पुराना मान्यताहरुको कुरा गर्दा दूध बिहान पिउनुपर्छ ताकि यो सजिलै पच्न सकोस । आजकालको जीवनमा जो मानिसहरु एक्सरसाइज गरेपछि बिहान दूधको सेवन गर्छन्, उनीहरुलाई एसिडीटी हुन सक्छ ।
त्यसैले दूध वा चियाँसँग बिस्कुट-पाउरोटी खान सल्लाह दिइन्छ ।
– मसल्स बनाउनलाई राति पिउने आफ्नो मांशपेशी बलियो बनाउन चाहने व्यक्तिहरुले रातमा दूध पिउँदा यसमा हुने प्रोटीनले उनीहरुलाई अत्यधिक फाइदा गर्छ । पोषणविदहरुको भनाईमा राति सुत्नुअघि कुनै पनि कुरा खानाले शरीरमा उर्जाको सञ्चार पनि हुन्छ ।
-साँझ परेपछि पिउने साँझ परेपछि कुनै पनि बेला दूध पिउनु स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित मानिन्छ ।
आयुर्वेद विशेषज्ञहरुका अनुसार दूध बिहानै वा राति सुत्नुअघि पिउनु मुनासिब हुन्छ । यसबाट अत्यधिक लाभ लिनका लागि यसमा अश्वगन्धा वा त्रिफला मिलाएर पिउनुपर्छ । यसबाट तपाईंलाई राति राम्रो निद्रा पर्छ भने आँखालाई पनि यसले फाइदा पुग्छ ।
गाई र भैंसीको दुधमा हुने केही फरक
गाईको दुधमा ९० प्रतिशत पानी गाईको दुध निकै पातलो हुन्छ । गाईको दुधका ९० प्रतिशतसम्म पानी हुन्छ । जसले शरीरमा आवश्यक पानीको मात्रा पुरा गर्न सहयोग गर्छ ।
पश्चिमाहरूको रोजाइमा गाईको दुध संसारभर नै गाईको दुध प्रयोग गरिन्छ तर पश्चिमीमुलुकका मानिसहरू अन्य देशका तुलनामा गाईको दुध बढी खाने गर्छन ।भारत, पाकिस्तानलगायत देशमा भैंसीको दुध बढी प्रयोग गर्छन ।
गाईको दुधमा चिल्लो कम गाईको दुधमा न्यून मात्रामा चिल्लो हुन्छ । जसका कारणले यो पातलो र यसमा कम फिँज हुन्छ ।
भैंसीको दुध बाक्लो भैंसीको दुधमा क्याल्सियमको मात्रा बढी हुने भएकाले हाइपरटेन्सन, मिर्गौला रो-गीका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
दुधमा बेसार मिसाएर खानुका अचुक फाइदा आयुर्वेदमा बेसारलाई सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक एन्टिबायोटिक भनेर व्याख्या गरिएको छ । यसैले छाला, पेट तथा अन्य रो-गका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दुधमा पनि प्राकृतिक एन्टिबायोटिक रहेको हुन्छ । यसले शरीरमा हुने प्राकृतिक संक्रमणलाई रोकथाम गर्दछ ।
यदि बेसार र दुधलाई मिसाएर सेवन गर्ने हो भने हाम्रो शरीरलाई यस्ता फाइदा हुन्छन्
– दुध र बेसारको प्रयोगले हाम्रो शरीरमा भएका हा-निकारक तत्व बाहिर निस्कन्छन् । विशेषगरी र-गतमा भएको हा-निकारक तत्व तथा कलेजोलाई सफा राख्न बेसार र दुधले सहयोग गर्दछ ।
-बेसार र दुध मिसाएर खाँदा शरीरका जोर्नी दुख्ने सम-स्या पनि हट्छ । यसबाहेक बाथरोगका कारण हुने सुजनलाई पनि कम गर्दछ ।
-दैनिकरुपमा एक गिलास दुधमा आधा चम्चा बेसार मिसाएर खाँदा प्रयाप्त मात्रामा क्याल्सियम प्राप्त हुन्छ । जसका कारण गर्दा हड्डी स्वस्थ तथा मजबुत हुन्छ ।
– बेसार हालेको दुध खाने हो भने क्यान्सरका कारण मानव कोषमा भएको डिएनएमा पर्ने असर वा हा-नीलाई रोक्दछ भन्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ। यस बाहेक क्या-न्सर उपचारमा प्रयोग गरिने केमोथेरापी प्रविधिको साइड इ-फेक्टलाई कम गर्दछ ।
– दुध र बेसार सेवनले कान दुख्ने स-मस्या पनि समाधान हुन्छ । शरीरमा रक्त सञ्चारलाई बढाएर कान दुख्ने पी-डा कम हुने गर्दछ।
– छालासम्बन्धी विभिन्न सम-स्याबाट छुटकारा पाउनका लागि बेसार हालेको दुध उपयोगी मानिन्छ।
-दुध र बेसार मिलाएर सेवन गर्ने हो भने पेटसम्बन्धी विभिन्न रो-ग निको हुन्छन्। पखला लाग्ने, पेट दु-ख्ने, ग्याष्ट्रि-क तथा अ-ल्सर जस्ता समस्याबाट पीडि-त बिरामीलाई बेसार अमृत समान मानिन्छ।
-म-हिनावारी भएको बेलामा पेट दु-ख्ने समस्याबाट मुक्त हुन बेसार र दुध प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै ग-र्भवती अवस्थामा र-गत बग्ने समस्यालाई पनि कम गर्दछ। सुत्केरी भएपछि सामान्य अवस्थामा छीटो फर्कन पनि दुध तथा बेसारले सहयोग गर्द छ ।
-चिसोका कारण रुघाखोकी लाग्ने मानिसले बेसार तथा दुध मिसाएर खाने हो भने चाँडो निको हुन्छ ।
– अनुहारलाई चम्किलो बनाउन बेसार तथा दुधले सहयोग गर्दछ । बेसारमा दुध मिलाएर अनुहारमा लगाउने हो भने छाला चम्किलो हुन्छ।
-आयुर्वेद अनुसार बेसार प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो रगत सफा हुन्छ । यसले र-क्त सञ्चारलाई मजबुत बनाउनुका साथै रक्तनलीलाई सफा राख्दछ । यसबाहेक रगत पातलो बनाउन पनि सहयोग गर्दछ ।
– दैनिक एक गिलास दुधमा आधा चम्मा बेसार मिलाएर पिउने हो भने शरीरमा भएको अनावश्यक बोशो कम हुन्छ । यस कारण मोटोपन घटाउन पनि बेसार र दुध प्रयोग गर्न सकिन्छ।
source: Himalayan daily
Prevयी १२ खानेकुरा दुधसँग भुलेरपनि नखानुहोस्
Nextअष्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो शहरमा १११ दिने लकडाउन अन्त्य
कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई सरकारले २५ लाख क्षतिपूर्ति दिने
जिउदै छन त शाही ? खुल्यो बास्तबिकता हेर्नुस
११ फागुन मंगलवार निकै राम्रो छ हेर्नुहोस् राशिफल